Events Videos | London Nepal News | Page 5
बेलायतमा नेपालीहरुको वृहत मेला’गोर्खा कप’२७ मेमा [इभेन्टमा आउन भिडियो हेर्नुस]
लन्डन । बेलायतमा नेपालीको सबैभन्दा वृहत फुटबल प्रतियोगिता गोर्खा कप यसपटक अझ व्यापक बनाउन आयोजक तमुधिं यू ...
लन्डन । बेलायतमा नेपालीको सबैभन्दा वृहत फुटबल प्रतियोगिता गोर्खा कप यसपटक अझ व्यापक बनाउन आयोजक तमुधिं यूके जुटेको छ । तमुधिं यूकेको आयोजनामा हुने गोर्खा कप १६ औं सस्करणको तयारी सम्बन्धि जानकारीका लाग ...
‘छक्कापञ्जा ३’मा अटाएनन् धुर्मुस (भिडियो)
चलचित्र 'छक्कापञ्जा ३'मा धुर्मुस नदेखिने भएका छन्। दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रको युनिट आज ...
चलचित्र 'छक्कापञ्जा ३'मा धुर्मुस नदेखिने भएका छन्। दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रको युनिट आजबाट फ्लोरमा गएको छ। चलचित्रमा दीपक र दिपिका बाहेक जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ लगायतक ...
बल्छिले गरे प्रेम विवाह (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । हास्य टेलिसिरियल ‘मेरीबास्सै’ मा बल्छि धुर्बे नामबाट परिचित मरिचमान श्रेष्ठ वैवाहिक जीवनमा बाँ ...
काठमाडौँ । हास्य टेलिसिरियल ‘मेरीबास्सै’ मा बल्छि धुर्बे नामबाट परिचित मरिचमान श्रेष्ठ वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । बल्छिले लमजुङ भोटेओडारकी करुणा खड्कासँग प्रेम विवाह गरेका हुन् । उनले ६ वर्ष लामो प ...
बोनी कपुरले लिए पारिवारिक फोटो (भिडियो)
बलिउड अभिनेता अनिल कपुरकी छोरी तथा अभिनेत्री सोनम कपुरको विवाह सम्पन्न भएको छ। विवाह पछिको रिसेप्सन पार्ट ...
बलिउड अभिनेता अनिल कपुरकी छोरी तथा अभिनेत्री सोनम कपुरको विवाह सम्पन्न भएको छ। विवाह पछिको रिसेप्सन पार्टीमा, बलिउड सेलिब्रेटीहरूका सहभागिता भव्य बनेको थियो । यसै क्रममा यो परिवार सोनम कपुरको विवाहमा ...
अशोक दर्जीको पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ। बालगायक अशोक दर्जीको पहिलो गीत 'मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन' सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँक ...
काठमाडौँ। बालगायक अशोक दर्जीको पहिलो गीत 'मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन' सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित 'स्टुडियो नाइन'मा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उक्त गीतको म्युजिक भिडियो रिल ...
जवानी समालेर राख्न नसक्ने भन्छिन गायिका सृजना (भिडियो सहित)
लण्डन। एक पछि अर्को गीत बजारमा ल्याएर चर्चा कमाउन सफल गायिका सृजना खत्री (हाउडे माया )को नया आइटम गीत युट ...
लण्डन। एक पछि अर्को गीत बजारमा ल्याएर चर्चा कमाउन सफल गायिका सृजना खत्री (हाउडे माया )को नया आइटम गीत युटुब मार्फत सार्वजनिक भएको छ । 'मिठो बोली ' नामक उक्त गीतको शब्द तथा स्वोर स्वयंम गायिका खत्रीको ...
पुष्कल शर्माको “बाँचा कसम” सार्बजनिक (भिडियो)
आत्मा विश्वास प्रा. लि. को प्रस्तुतिमा चेतन थापा मगर र सुदिप शंकरको नयाँ प्रेम कथामा आधारित “बाँचा कसम” ब ...
आत्मा विश्वास प्रा. लि. को प्रस्तुतिमा चेतन थापा मगर र सुदिप शंकरको नयाँ प्रेम कथामा आधारित “बाँचा कसम” बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबमा सार्बजनिक भएको छ । उक्त गीतमा स्वरका धनी गायक पुष्कल शर्मा ...
शिरफुलको शिर्ष गीतलाई अहिले सम्म ४० लाख बढीको झड्का ! (भिडियो)
राजकुमार खाती काठमाण्डौ । चलचित्र शिरफुलको शिर्ष गीत भिरै माथि भिर फूल शिरै माथि शिरफूलले युट्युवमा निकै ...
राजकुमार खाती काठमाण्डौ । चलचित्र शिरफुलको शिर्ष गीत भिरै माथि भिर फूल शिरै माथि शिरफूलले युट्युवमा निकै तहल्का मच्चाईरहेको छ । सकारात्मक प्रतिक्रियाका साथै प्रस्तुत गीतले धेरैको मन जितेको छ । नेपाली ...
यस्तो छ ‘कोहलपुर एक्सप्रेसको’ ट्रेलर
अभिनेत्री केकी अधिकारी निर्मित चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सो चलचित्र आगामी ब ...
अभिनेत्री केकी अधिकारी निर्मित चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सो चलचित्र आगामी बैशाख १४ मा प्रदर्शन हुने छ । चलचित्रमा केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, रविन्द्र झा, ब ...